Gazette Attack 2015 | Myanmar Gazette News Media Forum Network
My Dear Diary » Gazette Attack 2015	14
Gazette Attack 2015
Posted by စိန်ကြက်ဆင် on Nov 19, 2015 in My Dear Diary | 14 comments
ကျောက်စိမ်းတိန်ညင်ဟာ ကျနော် ရဲစည်ဖြစ်ပြီးးးးး
စိန်ကြက်ဆင်ကတော့ ရဲ….. ဖြစ်ကြောင်းလာပြောရင်းးးးးးး
သား ပြန်လာဘီလို့ အါ့လာပြောတာ လောလောဆယ် စလုံးမှာ ဟို မျက်မှန်သားအမိ/သားအဖ သုံးယောက်ကို ထောက်လှမ်းရေး လိုက်လုပ်ဦးးးးမယ်
အချိန်ရရင် ဟမ်ဘာဂါ အခန်းရှေ့ ကွမ်းစားထွေး ထွေးခဲ့မယ် ……
နောက်လ အလှည့်ကျတာက ကာလီဖိုးနီးယားက ——— အိမ်အမှတ် ( )
View all posts by စိန်ကြက်ဆင် →	Blog
kai says: 6701, De Soto Ave. #236
မသိမှာစိုးလို့..။ ကကြောင်ကြီးနဲ့ တရပ်ကွက်ကျော်… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1148
ကျောက်စိမ်း တိန်ညင် says: လေယာဉ် လက်မှတ်ဖိုး ပိုက်ဆံ စုလိုက်ဦးးးးမယ် ….
ဒီဇင်ဘာလကုန်လောက်တော့ ရောက်ဖို့များတယ် သဂျီးဆိုတာ မြင်ဖူးတယ်ရှိအောင် လာတွေ့ဦးမယ်ပ ….
kai says: 213 422 2307 ရောက်ရင်ဖုံးဆက်… ဒါဗြဲ..။
ဇီဇီခင်ဇော် says: နာ့ အိမ်ရှေ့ မှာ စီစီ တီဗီ တပ်ထားးတယ်
မြစပဲရိုး says: အော သားလေး ပြန်လာပြီလား။
အသဲများ ကွဲ လာ လေရော့သလား။ :-)))
ကျောက်စိမ်း တိန်ညင် says: ဒီမှာ ဒေါ်မြစပဲရိုး ….. အသည်းက ကွဲစရာ မရှိတော့ပါဘူး …. အရက်သောက်များလို့ ခြောက်လုလုနီး ;(
Shwe Ei says: ​စောဂဲ​မွေးက​ရော ဘဒူလဲ ???
Ma Ma says: အော်………… တိတ်တဆိတ် ထောက်လှမ်းနေတာကိုးးးး Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12200
Alinsett @ Maung Thura says: .ရန်ကုန်က ဘတ်စ်ကားတွေပေါ်မှာ…ထောက်လှမ်းရေး လုပ် မလုပ်…ဖြေပါ။ (၅၀ မှတ်)
Mike says: .ကျောက်စိမ်းတိန်ညင်…တောကိုဝင်
.မပစ်ပါနဲ့ ကြီးမိုက်ရယ်..ဘလက်တိုက်ပါ့မယ်…ခိခိ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1148
ကျောက်စိမ်း တိန်ညင် says: အာ့ဒွေ ဖေ့ဂို မကြိုက်တာ …. ခခ် ခခ်
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: လာမယ်ဆို အကြောင်းကြားလိုက် မန်းလေးမှာတော့ မရှိဘူး
Wow says: နိကို ကချင်ဘက်ပေါ်တာဆွဲတဲ့ထဲ ပါသွားဒါရှို… ကယ်ဂျပါအူးချင်… ခင်ခက်ခက်ခေါကို… တရုပ်ပြီရောင်းစားမခံရခင် ကယ်ဂျဘာာာာာ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 6348
Ko Two says: ဂေဇက် အတက်တော့ မသိပါဘူး
တညင် အတက်တော့ ဆူးတတ်ပါတယ်
ရွာ့ချဉ်ဖတ် ဂျော်လကီငခြောက် ဆိုတဲ့လူ လက်ကမြင်းသွားတာဖြစ်မယ်